GlobalCoin စျေး - အွန်လိုင်း GLC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GlobalCoin (GLC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GlobalCoin (GLC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GlobalCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $257 064.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GlobalCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GlobalCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GlobalCoinGLC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00024GlobalCoinGLC သို့ ယူရိုEUR€0.000203GlobalCoinGLC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000183GlobalCoinGLC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000218GlobalCoinGLC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00213GlobalCoinGLC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00151GlobalCoinGLC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00529GlobalCoinGLC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000891GlobalCoinGLC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000317GlobalCoinGLC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000335GlobalCoinGLC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00536GlobalCoinGLC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00186GlobalCoinGLC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0013GlobalCoinGLC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.018GlobalCoinGLC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0404GlobalCoinGLC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000329GlobalCoinGLC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000365GlobalCoinGLC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00745GlobalCoinGLC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00167GlobalCoinGLC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0256GlobalCoinGLC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.284GlobalCoinGLC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0923GlobalCoinGLC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0176GlobalCoinGLC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00661
GlobalCoinGLC သို့ BitcoinBTC0.00000002 GlobalCoinGLC သို့ EthereumETH0.0000006 GlobalCoinGLC သို့ LitecoinLTC0.000004 GlobalCoinGLC သို့ DigitalCashDASH0.000003 GlobalCoinGLC သို့ MoneroXMR0.000003 GlobalCoinGLC သို့ NxtNXT0.0187 GlobalCoinGLC သို့ Ethereum ClassicETC0.00004 GlobalCoinGLC သို့ DogecoinDOGE0.0693 GlobalCoinGLC သို့ ZCashZEC0.000003 GlobalCoinGLC သို့ BitsharesBTS0.00739 GlobalCoinGLC သို့ DigiByteDGB0.00768 GlobalCoinGLC သို့ RippleXRP0.000852 GlobalCoinGLC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000008 GlobalCoinGLC သို့ PeerCoinPPC0.000796 GlobalCoinGLC သို့ CraigsCoinCRAIG0.109 GlobalCoinGLC သို့ BitstakeXBS0.0102 GlobalCoinGLC သို့ PayCoinXPY0.00419 GlobalCoinGLC သို့ ProsperCoinPRC0.0301 GlobalCoinGLC သို့ YbCoinYBC0.0000001 GlobalCoinGLC သို့ DarkKushDANK0.077 GlobalCoinGLC သို့ GiveCoinGIVE0.52 GlobalCoinGLC သို့ KoboCoinKOBO0.0547 GlobalCoinGLC သို့ DarkTokenDT0.000221 GlobalCoinGLC သို့ CETUS CoinCETI0.693